व्यङ्ग्य - सुनको भाउ बढ्नुको पाँच रहस्य | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
साउन २४, २०७७ शनिबार ९:८:५० | मिलन तिमिल्सिना
काठमाण्डौ - कोरोनाको सङ्क्रमण, नेकपाको घरझगडा र सुनको भाउमा को कतिसम्म बढ्न सक्ने भन्ने हानथाप छ । तीनैथरी हतपति अडिने र झर्ने मूडमा छैनन् । सके र पाएजति बढेको बढ्यै गर्ने सुरमा छन् ।
कोरोनाबाट जोगिन मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर धेरैले लगाउँदैनन् । एक्लै हिँड्दा लगाउँछन्, साथीभाइ भेट्दा फुकाल्छन् । कतिले कानमा झुण्ड्याउँछन्, कतिले चिउँडोमा अड्याउँछन् । कतिले चाबी हल्लाएझैं हातको औंलाले घुमाउँदै पनि हिँड्छन् । नाक र मुख छोप्नुपर्ने मास्क धेरैले किन सही तरिकाले लगाउँदैनन् त ? यसको खास कारण पत्ता लागेको छ ।
कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाएर मात्रै सुख पाईंदैन । साबुनपानीले बेलाबेला हात पनि धुनुपर्छ । स्यानिटाइजर दल्नुपर्छ । हात धुँदाधुँदा, स्यानिटाइजर दल्दा दल्दा हातको छाला त जाला भन्ने डर भैसक्यो । औंलामा लगाएको औंठी र पाखुरामा भएको बालाको के हालत होला ? खिइएर सकिएला भन्ने डर ।
सुनले भोक मेट्दैन, आङ ढाक्दैन । सुन लगाउने भनेको अरुलाई देखाउनको लागि हो । अझ चाडपर्व, विवाह, ब्रतबन्ध र भोजभतेरमा सुनका गरगहना देखाउने प्रतिष्पर्धा हुन्छ । सुन देखाउनकै लागि चाडपर्व आइरहोस् र भोजभतेरबाट निम्ता मिलिरहोस् भन्ने धेरैलाई लाग्छ । अनि मौका पाउनेबित्तिकै भएभरका गरगहना भिरेर जमघट भैहाल्छन् । सुनको गरगहना देखाउनकै लागि भोजभतेर जमघटमा धेरै मान्छेको घुईंचो हुन थाल्यो ।
कोरोनाले घरघरमा समस्या बढाएको छ । रोगभन्दा बढी भोकको चिन्ता छ । काम र कमाइ गुमेको छ । अलिअलि भएको पनि सकिन थालिसक्यो, भोलिपर्सि के खाने भन्ने चिन्ता छ । संकटको योबेला फारोतिनो गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्न हुँदैन । तर घरमा नुन नभए पनि अलिअलि भएको पैसा सुनमा खर्च गर्ने धेरैको प्रवृत्ति छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नाममा छ । नाम चाहिँ सुन, तर मान्छेले सुन्दैनन् । सुन मात्रै भन्दा किन भनेको सुन्दारहेछन् । अनि रीन गरेर भए पनि सुन किन्छन् । बरु खाँदैनन्, सुन देखाएर हिँड्छन् । अब सुनलाई नामअनुसारकै बनाइराख्न भाउ बढाइएको हो । सुन अर्थात सुन्नको लागि मात्र । किन्न र पहिरनको लागि होइन ।
Aug. 9, 2020, 5:21 a.m.
सटिक ब्यङ्ग्य ।